गुप्त निवेशक को त्रुटिहरू. त्रुटि2- Blockchain समाचार
Cryptotrader पत्रुस McCormack गुप्त बजार मा स्थिति विश्लेषण र धेरै नयाँ गुप्त उत्साही निरपेक्ष निश्चितताका साथ बजार आउन तिनीहरूले चाँडै धनी प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा आए. McCormack अनुसार, यो मात्र निराश तुल्याउँदैन, तर पनि धन को एक तीव्र हानि गर्न.
स्वाभाविक, जब बजार एक ले-बन्द अवधि अनुभव छ, धेरै नयाँ लगानीकर्ताले यसलाई आउन, एउटा सजिलो लाभ प्राप्त गर्न आशा. यसबाहेक, तिनीहरू सबै समाचारहरूमा यो बारेमा लेख्न, र जो व्यवस्थापन ती राम्रो तलब प्राप्त गर्न, आफ्नो सफलता कथाहरू बारेमा बताउन. तर बुलबुले जन्म छन्: यो एक डट-com बबल संग भयो, र नै थियो 2008 आवास बबल.
तथापि, गुप्त बजार तत्काल आय को योजना अन्तर्गत काम गर्दैन. यो एक speculative बजार छ, केही खेलाडीहरू चाँडै धनी प्राप्त गर्न सक्षम थिए. धेरै छिटो आफ्नो सबै निवेश गुमाए. गुप्त बजार, अन्य कुनै पनि बजार जस्तै, cyclical छ, जसको अर्थ छ कि वृद्धि को अवधि पछि, गिरावट अवधि आवश्यक हुनेछ. यो भयो रूपमा 2013: cryptology को सामान्य अनुसूचीमा, यो अवधिमा साना विकास एक क्षण जस्तो देखिन्छ, जो पछि नगण्य घटेको थियो.
तथापि, वास्तबमा, नोभेम्बर मा 2013 गुप्त बजार को पूँजीकरण तेजी Bitcoin मा निवेश गर्ने नयाँ खेलाडीको आगमन को पृष्ठभूमि विरुद्ध वृद्धि – भविष्यमा को क्रांतिकारी नयाँ पैसा. त्यसैले, द्वारा डिसेम्बर 4, 2013 संख्या यसको पहिलो अधिकतम पुग्यो $ 15.7 अरब. र द्वारा डिसेम्बर 19, पूँजीकरण जोडले लगभग दुइटा गिर – गर्न $ 6.9 अरब. गुप्त बजार ठीक र विगतका Highs पुग्न थप दुई वर्ष लाग्यो.
यो अवस्था दोहोरिन सक्छ, पनि आज हुनत गुप्त मुद्रा को लागि बजार हामी देखे के बाट धेरै फरक छ 2013: खेलाडीहरू यो थप जानकारी, र वातावरण तेजी नयाँ प्रयोगका विकास र फेला छ. तैपनि, यो कुनै पनि क्षण मा संक्षिप्त गर्न सक्ने एक speculative बजार छ. को पाठ्यक्रम, तपाईं धनी यसलाई छिटो प्राप्त गर्न सक्छन् कसरी उदाहरणहरू छन्, तथापि, कारण गरिबी योजना लगानीको रणनीति सबै निवेश गुमाउने को संभावना धेरै पटक उच्च हो.
गुप्त निवेशक को त्रुटिहरू. त्रुटि 1 गुप्त निवेशक को त्रुटिहरू. त्रुटि 3
$20एम ईथर fr ह्याक ...
अघिल्लो पोस्ट:Сrypto निवेशक को त्रुटिहरू. त्रुटि 1
अर्को पोस्ट:गुप्त निवेशक को त्रुटिहरू. त्रुटि 3